मिडियालाई गुगल र फेसबुकले पैसा तिर्नुपर्ने नियम, के अरू देशमा पनि आउँदै छ ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
बिहीबार, फाल्गुन १३, २०७७ १३:५३
मिडियालाई गुगल र फेसबुकले पैसा तिर्नुपर्ने नियम, के अरू देशमा पनि आउँदै छ ?
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले गुगल र फेसबुकले समाचार सामाग्री राखेबापत सम्बन्धित समाचार संस्थालाई पैसा तिर्नुपर्ने कानून पारित गरेको छ । अष्ट्रेलियाको संसदले बिहीबार नयाँ कानून पास गरेको हो ।
योसँगै यस्तो कानून परित गर्ने अष्ट्रेलिया विश्वमै पहिलो देश बनेको छ । सुरुवाती चरणमा अष्ट्रेलियाले ल्याएको यो कानूनविरुद्द सबै टेक कम्पनी उभिएका थिए । गुगलले पनि सुरुवाती चरणमा यस्तो कानून आएको खण्डमा अष्ट्रेलिया छाड्ने कुरा समेत गरेको थियो ।
फेसबुकले केही दिनसम्म अष्ट्रेलियाका मिडिया कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध नै गरेको थियो । तर, पछि गुगल र फेसबुक दुवै उक्त कानून मान्न तयार भएका छन् । फेसबुक र गुगल उक्त कानुन मान्न तयार भएसँगै अष्ट्रेलियाले नयाँ कानुन पारित गरेको हो ।
नयाँ कानूनमा केही सुधार गरी फेसबुक र गुगललाई बाध्य नबनाउने खालका प्रावधान राखिएको छ । योसँगै स्थानीय समाचार आउटलेटसँगको वार्ता असफल भयो भने अष्ट्रेलिया पहिलो देश हुनेछ जहाँ एक सरकारी निकायले टेक जायन्टहरूद्वारा उनीहरुलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै फेसबुक र गुगलले कतिपय ठूला सञ्चार माध्ययमलाई ठूलै रकम तिर्न तयार भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियामा भएको यो नयाँ अभ्यासले अरु देशका लागि पनि ढोका उघारिदिएको छ । तर यस्तो कानून सबैतिर सहजै कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । विश्वमा रजगज चलाइरहेका प्रविधि कम्पनीहरुले प्राय एउटा देशका लागि नरम र अरुका लागि कठोर बन्ने वा नीति फरक फरक बनाउने गर्दैनन् ।
यसर्थ अस्ट्रेलियाली सरकारले लामो तयारीपछि त्यहाँको सञ्चारमाध्यमको पक्षमा ल्याएको कानून अन्य देशले पनि अनुकरणीय बन्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । बिहीबार राति फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपका सेवा एकैपटक डाउन भए । विश्वभरका हजारौं
पब्जी खेल्ने क्रममा भारतमा एक बालकको हत्या
काठमाडौं । पब्जीका कारण भारतको करनाटकमा १२ वर्षीय बालकको हत्या काठमाडौं । पब्जीको क्रेज यति
मार्क जुकरबर्ग ह्वाट्सएपको प्रतिस्पर्धी सिग्नलमा भेटिएपछि…
काठमाडौं । केही दिन अघि मात्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका कयौं प्रयोगकर्ताको डेटा लिक भयो ।
भारतको प्रतिबन्ध र अमेरिकी दबावबीच टिकटक बन्यो सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एप
काठमाडौं । शर्ट भिडियो शेयरिङ एप टिकटकले पछिल्लो समय अनेकौं चुनौतिको सामना गरिरहेको छ ।